TAMAANDHIGA "CABBIRRADA RUUSHKA" F1: SHARAXAADDA NOOCYADA KALA DUWAN EE YAANYADA, ASTAAMAHA, SAWIRADA IYO BEERAHA - BEER CAGAARAN
Noocyada iyo sharaxaada kala duwan ee yaanyada qaranka: waxaan koraynaa "Ruushka" F1
Run ahaantii yaanyo "cabbirka Ruush" wuxuu ku noolyahay magaciisa.
Large-fruited, oo macaan, midho leh, waxaa koray ma aha oo kaliya bannaanka u. Beeralayda iyo beeraha iyo beeraha iyo beeraha waxay ku beeraan miisaaniyad warshadeed.
In this article waxaan kuu sheegi doonaa sababta noocyada kala duwan ee aad u jeclaan ee bannaanka u. Halkan waxaad ka heli doontaa sharaxaad buuxda ee noocyada kala duwan, sifooyinka, sifooyinka beeraha iyo daryeelka, wax ka bartaan awoodda yaanyada kuwaas oo ka hortagaya cudurrada iyo cayayaanka.
Tamaandho "cabbirka Ruush": sharaxaadda noocyada kala duwan
Magaca dugsiga Cabbirka Ruushka
Bisaylka 125-128 maalmood
Foomka Dusha sare waxoogaa lakabyo, jidhku waa mid casri ah, macaan, qaabkana waa la isku dhejiyaa, wax yar ayuu udhigaa
Midab marka uu bislaado casaan
Cunto dhexdhexaad ah laga bilaabo 650 garaam ilaa 2 kg
Codsiga universal, waxaa loo isticmaalaa sida saladh cusub, casiir iyo suugo
Noocyo dhaadheer 7-8 kg mitir labajibbaaran
Noocyada sii kordhaya Beeridda 60-65 maalmood ka hor beerashada, 2-3 dhirta halkii 1 sq. M, qaadashada marxaladda 2 caleemo dhab ah
Cadaadiska cudurada Waxay u adkeysan kartaa Fusarium, Cladosporia, Fayadhaha Mosaic Tobacco
Tani waa isku xidhka jilicsan ee Ruushka waxaana lagu taxay Diiwaanka Geeddi-socodka Hagidda ee 2002.
Tamaacada tamaandhiga ah "cabbirka Ruushka F1" - warshad aan caddaalad ahayn, gaaraysa 150-180 cm oo dherer ah. Ciriiri ee wax soo saarka sare, waxay ku haboon tahay beerashada dhammaan dhulka Territory ee lagu koriyo iyo hoos filayo filimka. Goobta furan lama abuurayo.
"Cabbirka Ruushka" - yaanyo goor hore u bislaaday, miraha waxay u bislaadaan 125-128 maalmood ka dib biqilka oo dhan. Sida hybrid, adkaysi u cudurada badan.
Waxaan u soo jeedineynaa faahfaahintaada faa'iido leh ee ku saabsan waxa go'aamiya, kala-go'aamiyaha, noocyada caanaha ah iyo kuwa aan tayada lahayn ee yaanyada yihiin.
Iyo sidoo kale maqaalo yar oo ku saabsan noocyo badan oo dhalaya iyo cudurada u adkaysta.
Midhaha bisilka ee tamaandhiga "cabbirka Ruush" wuxuu leeyahay midab cas oo miisaankeedu yahay 650 g ilaa 2 kg. Dusha miisaankoodu yar yahay, jiidhku waa mid casri ah, macaan, muuqaalkuna waa wareegsan yahay, wax yarna waa la siman yahay. Miraha waa yar yihiin, waxay leeyihiin 4 saliida. 2-3 yaanyada waxay ku koraan burush.
Waxaad is barbar dhigi kartaa miisaanka miro iyo noocyo kale oo jadwalka hoose ah:
Cabbirka Ruushka laga bilaabo 650 garaam ilaa 2 kg
Dollada 250-400 garaam
Deganaha xagaaga 55-110 garaam
Madaxweyne 250-300 garaam
Kostroma 85-145 garaam
Farabadan qabow 15-20 garaam
Qeybta madow 50-70 garaam
Kala duwan yaanyo "cabbirka Ruush" waxaa loo tixgeliyaa salad. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo isticmaalaa wax lagu karsado yaanyo, khudaarta cagaaran ee qasacadaysan iyo qayb ka mid ah adjika ama khudradda cagaaran. Sababtoo ah cabbirkeedu weyn yahay, maaha mid ku habboon cammuudda oo dhan.
Yaanyada kala duwan "cabbirka Ruush" waxaa lagu koray oo kaliya dhulka xiran. Sababtoo ah naqshadda sare waxay u baahan tahay xirashada. Oo waxaad isaga xidhaa dhawr maalmood gudahood ka dib markaad transplanting.
Warshad waa mid dhexdhexaad ah, laakiin waxay ku kala duwan yihiin tiro badan oo caleemo ah. Marka koray, waxaa loo sameeyey 1 stem iyo si joogto ah tallaabooyinka. Caleemo hoose ka hor inta aan la nadiifin burushka ubaxa. Dhammaadka xilliga sii kordhaya, xoqin dhibicda sii kordheysa.
"Cabbirrada Ruushka" waxaa lagu kala saaraa dhalidda sare ee 7-8 kg halkii mitir labajibbaaran. Qaabka beeritaanka waa 50 x 70 cm, inta jeer ee la beerto waa wax aan ka badneyn 2-3 busho halkii mitir labajibbaaran. m
Waxaad isbarbardhigi kartaa kala duwanaanshahan kala duwan ee kala duwan kuwa kale jadwalka hoose:
Mooska casaan 3 kg oo baadiyaha ah
Wadnaha Honey 8.5 kg oo duurka ah
Maxay yaanyada Ruushka u egtahay mid u eg - sawir yaanyo ah:
Aan u jeesano sharaxaadda beerista yaanyada "size size". Sida dhan yaanyada giant, "F1 Ruush F1" lagu beeray geedo horraantii Abriil. Bishii May, geedo yihiin transplanted galay aqalka dhirta lagu koriyo. Si miraha waaweyn loo helo iftiin ku filan, hawo iyo meel, waa in la beeraa sida ugu yaryar.
Kama aad kari kartid dhirta quudinta bacriminta dabiiciga ah oo leh heer sare oo ah nitrogen.. U dooro dhadhanka iyo dharka fosfatiriga iyo isticmaalka cuntada kalluunka.
Sidoo kale akhri sida dharka sida iodine, khamiir, hydrogen peroxide iyo ammonia.
Ka dib marka ugu horeysa ee miro lagu dhejiyo gacanta ugu horeysa oo koraayo xajmiga lowska, waxaad ka saari kartaa inta badan ubaxyada iyo ugxan-yaryar, tegaayo kaliya ugu weyn iyo caafimaad ahaan, si aad u heli karto oo kaliya dhowr ah, laakiin yaanyo badan oo laga soo bilaabo 1 baadiyaha.
On our site waxaad ka heli doontaa articles faa'iido leh oo ku saabsan waraabinta, mulching iyo daaqa yaanyada.
Oo weliba waxaad ka heli kartaa aqoon u leh murugada technology ee ee sii kordhaya noocyo hore ee yaanyada.
Kala duwanaanshuhu wuxuu u adkeysan karaa fusarium, cladosporia, iyo fayraska tubaakada. On our site waxaad ka heli doontaa macluumaad badan oo faa'iido leh oo ku saabsan cudurrada ugu caamsan ee yaanyada ee lagu koriyo iyo hababka ay ula dhaqmaan iyaga. Iyo sidoo kale ku saabsan noocyo yihiin ugu adkaysi u cudurada iyo waqti isku mid ah bixiyaan goosashada wanaagsan, oo ah boqolkiiba boqol boqolkiiba adkaysi u leh dabaylo goor dambe.
Jadwalka hoose waxaad ka heli doontaa isku xirka noocyada yaanyo leh marxalado kala duwan:
Qaangaarka hore Xilliga bartamaha Xilliga dhexe
Buuxinta cad Ilya Muromets Garaacista madow
Debut Biya way kacday Ivanovich F1
Qolka la yaabay Perseus Ruushka
Annie F1 Giant Sarre Guduud
Solerosso F1 Blizzard Transnistria Cusub